Inqaku leRedmi 7 lidlula iiyunithi ezingama-20 ezigidi zithengisiwe | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Uluhlu lweRedmi Qaphela 7 luyimpumelelo kwintengiso. Le yinto esele siyazi iinyanga, xa kwavela into yokuba Iiyunithi ezili-15 lezi fowuni zithengisiwe. Ukuthengisa kuyaqhubeka ukuqhubela phambili kwiinyanga, kuba ekugqibeleni sele bedlulile kwizigidi ezingama-20, njengoko uphawu lwesiTshayina lubhengeza kuthungelwano lwayo lwasentlalweni.
Ukuthengisa kwahlulwe phakathi kweemodeli ezimbini kolu luhluI-Redmi Qaphela i-7 kunye neNqaku le-7 Pro Nangona inkampani ingatsho ukuba nganye yeefowuni ithengise kangakanani, kodwa siyazi ukuba imodeli eqhelekileyo yenye yezona zidumileyo kwintengiso, iyifowuni yesithathu ethengiswa kakhulu eYurophu kwikota yesibini yesibini.
Okucacileyo kukuba sijamelene Olunye lwezona ndawo zidumileyo kwihlabathi liphela. Inqaku leRedmi 7 liye laba yenye yeefowuni ezithandwa kakhulu phakathi kuluhlu, ngexabiso elikhulu lemali. Imodeli yePro nayo ithandwa kakhulu, inegalelo ekukhuleni kolu luhlu.
Ukongeza kwigalelo ekukhuleni kweXiaomi kunye neRedmi. Ngokukodwa kwiimarike ezinje nge-India, ezi modeli ziqhuba kakuhle, ezibanceda banesabelo sentengiso esihle. Nangona ezi fowuni ziye zathandwa kakhulu eYurophu, njengoko sele sibonile.
Silungiselela ukudibana kungekudala oza kungena ezihlangwini zeRedmi Qaphela 7. Ukusukela ukuphela kwenyanga uphawu lwaseTshayina lusishiya neNqaku 8, eya kuba njalo ifowuni yokuqala yekhamera engama-64 ye-MP thaca kuthi, ke ithembisa ukuba sesinye isixhobo esiya kuthi senze umdla kwimarike yamanye amazwe.
Okwangoku, sinokubona ukuba ukuthengisa kuyaqhubeka njani nokukhula, ke siza kubona ukuba ezi ziNqaku zeRedmi 7 ziphela ngaphezulu kwezigidi ezingama-25 xa kuphela unyaka. Into ecacileyo yile yenye yeentsapho ezithengisa kakhulu kwi-Android kwihlabathi liphela, kukho izinto ezimbalwa ezinokuqhayisa ngazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Inqaku leRedmi 7 lidlula iiyunithi ezingama-20 ezigidi zithengisiwe